के दर्शक र निर्माताको अपेक्षा पूरा गर्लिन त साम्राज्ञीले ? | Glamour Nepal
चलचित्र “ड्रिम्स”को आक्रामक व्यापार हुनुमा अनमोल केसी प्रति युवापुस्ताको क्रेजले ठुलो भूमिका खेल्यो। हुन पनि सहरिया युवापुस्ता अनमोल कै लागि फिल्म हेर्न हलमा ऒरिए। फिल्म बाट अनमोलले मात्र तारिफ पाएनन् बरु यही फिल्मबाट अभिनय यात्रा थालनी गरेकी साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहले पनि दर्शकहरुको मन जित्न सफल भईन।
प्रमोसनताका उनी अनमोलको छायाँमा परेकी थिइन्। ड्रिम्स हिट भयपछि पनि कतिपयले साम्राज्ञीको फिल्मी करिअर संकटमा परेको अनुमान गरेका थिए। किनभने, यस अघि अनमोलसँग स्क्रिन सेयर गरेका प्रकृति श्रेष्ठ र आना शर्माको हालत त्यस्तै थियो तर साम्राज्ञीले यो अनुमानलाई फेल गराइ दिइन्।
साम्रागीलाई आफ्नो फिल्ममा काम गराउन चाहनेहरुको लर्को नै लाग्यो तर निकै चुजी बनेकी साम्राज्ञीको ड्रिम्स रिलिज भएको ६ महिना पछि बल्ल नयाँ फिल्म ‘ए मेरो हजुर’को सुटिङ सुरु भयो। नायिका झरना थापाले निर्देशन गर्ने यस फिल्मका निर्माताले उनलाई आठ लाख रूपियाँ पारिश्रमिक दिएको चर्चा फिल्म बजारमा अझ सेलाएको छैन। सायद यही कारण हुनुपर्छ, दर्शक र निर्माताको अपेक्षा पूरा गर्न साम्राज्ञी सफल होलिन् त भन्ने जिज्ञाशा अहिले देखिनै प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ।
जीवन र संचिताको केमेष्ट्री : राधा फिल्मको नयाँ गीत ‘फूल सारा बेकार छन्’
डाक्टर सँग नायिका केकी अधिकारीको एस्तो पिरती!
कोल्ड मौसममा सुष्मा कार्कीको हट अवतार
अन्नपुर्ण बेसक्याम्पमा सम्राज्ञी … सँग ?